IGoa, ipharadesi eNdiya | Izindaba Zokuhamba
IGoa, ipharadesi eNdiya
UMariela Carril | | India, Yini ongayibona
Goa Ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu ezishisayo e India. Kuyinhloso yabadlali abaningi abasebenza ojosaka abafuna amabhishi amahle, okungajwayelekile, amasiko nokwehlukahlukana. Lesi sifundazwe saseNdiya siseduze noLwandle i-Arabia futhi sithokozela i- isimo sezulu esifudumele cishe unyaka wonkeYize kufanele unake izimvula nokushisa okukhulu ezinyangeni ezithile.
Namuhla sekuyisikhathi sethu sokungena eGoa bese sihlela uhambo lwethu olulandelayo oluya eNdiya.
2 Ukuvakasha kweGoa
Njengoba sishilo, kuyisimo saseNdiya esihlala ngaphansi kwamakhilomitha-skwele angama-3.700, esinogu oluningi nasendaweni eshisayo eseduze noLwandle i-Arabia. Izinsuku ezishisa kakhulu zenzeka ngoMeyi, zilandelwe yimvula yezimvula egcina kuze kube nguSepthemba.
IGoa ihlukaniswe yaba INorth Goa neNingizimu Goa y inhloko-dolobha yayo idolobha lasePanaji. AmaPutukezi aqoqa le ngxenye yeNdiya ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX ukulawula ukuhweba ngezinongo, ehlula amaSulumane nabantu bendawo. A) Yebo, IGoa yaba inhlokodolobha yasePortugal India kanye nesisekelo sombuso esisebenza esifundeni. Usilika nezinto zobumba ezivela eChina, amaparele namakhorali asePheresiya, izinhlobo zaseMalaysia bese zizodlula ekuhlonipheni kweGoa ...
Ngokufika kwamatilosi angamaDashi amandla esiPutukezi eGoa aqala ukuncipha. Lesi simo sahlanganiswa ubhadane, kamuva saxabana namakhosi endawo futhi ekugcineni, ngemuva kokuhambisa inhlokodolobha kulokho osekuyiPanaji manje, abaseBrithani bahlala eGoa ekuqaleni kwekhulu le-XNUMX. IPortugal yayingathathi hlangothi ngesikhathi seWWII ngakho-ke imikhumbi eminingi yaseJalimane yabonwa lapha ifuna isiphephelo.
Ekugcineni i-India yathola inkululeko ku-Great Britain ngo 1947 bese kuthi IPortugal yacelwa ngokusemthethweni ukuthi ibuyise iGoa. IPortugal ibingafuni bese imibhikisho ebhekiswe kubo kanye nokuvinjelwa kwaqala ukubaphoqa ukuba bahambe. Konke kwaphela empini ethile ngo-1961, amaPutukezi ashiya futhi iGoa yaba yingxenye yamazwe aseNdiya.
Uma sengikushilo konke lokhu, ngihlala ngithola ukuthi kunesidingo sokwazi okuthile ngomlando wesifunda ohlela ukusivakashela, ake sibone ukuthi sinikani kubahambi. Okokuqala, ukuthi yini umuntu azoyibheka kule ngxenye ye-India: Amabhishi. Amabhishi amancane anabantu abaningi atholakala eSouth Goa futhi lapha okuhle kunawo wonke amabhishi ase- Arossim nase-Utorda, eduze kwedolobha laseMajorda. Ngaphakathi kweNyakatho Goa kuyinto IBaga, i-Anjuna neCalangute.
Kuwo wonke amabhishi aseGoa ungenza imidlalo yezamanzi efana i-jet ski, paragliding, diving, snorkeling noma ukugibela ubhanana omnandi noma vakashela amasimu ezinongo, yingakho abaseYurophu beza eNdiya ekuqaleni. Isibonelo, iSahaki Spice Farm noma iParvati Plantation, okuyindawo ekhethekile yokutshala upelepele oshisayo ePonda. Uma uzihambela, zama ukuhamba kusenesikhathi ngoba amaqembu afike ngokuhlelwa afika futhi kugcwale.
Ungakwazi futhi i-kayaking eMfuleni i-Aguada noma i-rafting eMfuleni iMandovi noma eValpoi. Indawo edumile eBaga Beach yiSt. Anthony's Bar. Kunama-lounger elanga, amatafula anamakhandlela, umculo, i-karaoke nobumnandi obuningi. Umnyango olandelayo yindawo yokudlela yaseBritto, enye indawo okunconyelwa kuyo. Lapho kuhwalala, yonke into iyaphila kubajosaka ngakho-ke lungela ukuzijabulisa.
IPanaji, inhlokodolobha yaseGoa kungenye yezindawo ongeke uziphuthe. Ikuphi i- IGoa elidala, eyaziwa ngesikhathi esisodwa njenge- IRoma kusuka e-Estfuthi. Yilapho uzobona khona amasonto amadala (Basilica of Bom Jesus or the Church of Santa Catarina, enkulu kunazo zonke futhi evakashelwa kakhulu), izindlu zezindela, iminyuziyamu, izakhiwo zamakoloni nemipheme yobuciko. Ungahamba ngekota yesiLatin, nezindlu zayo ezindala ezinesitayela sesiPutukezi, kuhle ukuthumela izithombe ku-Instagram. Ngempela, i-Old Goa kungamagugu omhlaba.
Amabhishi nomlando, kodwa futhi nezilwane zasendle. Ungavakashela i- IMollem National Park ukuhlangabezana nama-panther, amabhere nezinyamazane, noma IBhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. Kunezinhlobo ezingaphezu kwezingama-200 zezinyoni kanti isiza sisezansi kwamagquma eWestern Ghats, futhi singavakashelwa nsuku zonke kusukela ngo-8: 30 ekuseni kuye ku-5: 30 ntambama. Nawe ungakwenza bheka ihlengethwaUma uthatha umkhumbi oya esiQhingini Esikhulu noma emanzini aseCandolim, eCalangute noma eSinquerim. I-ejensi enhle yokuhamba ngesikebhe kuJohn's Dolphin Tour, nefilosofi yayo "engenamahlengethwa, engenayo inkokhelo".
Amabhishi, umlando, izilwane zasendle nemisebenzi yezandla. Kuphi? Kuhlelo Imakethe Engavamile Ye-Ingo. Umsuka wale makethe uhlobene nokufika komJalimane ogama lakhe lingu-Indo ohlongoze ukuvula imakethe yezinhlanzi, uhlobo oluthile lwendawo yangoMgqibelo e-Arpora. Ihlala izinyanga eziyisithupha ngonyaka, ebusika, futhi uthola okuncane kwakho konke phakathi kwama-sweatshirt, imigexo yama-hippie, izitsha zasekhishini nezimbumbulu, njll. Kukhona uDJ obukhoma futhi uma ungathandi izixuku ungahamba ebusuku.
IGoa ingamakhilomitha angu-590 ukusuka eBombai, cishe amahora ayishumi nanye ngomgwaqo nehora elilodwa nje ngendiza. Kungumqondo omuhle ukuqala ngePanjim futhi ukuhlala esifundeni esinomlando kungumbono omuhle lapha. Uma unemali kunamahhotela amahle asezitolo njengoba esebenza ezindlini ezindala zamakoloni. Uma uthanda umbono wokuhlala olwandle, kokubili enyakatho naseningizimu kunezindawo zokuhlala zazo zonke izinhlobo. Uma uthanda i-Airbnb kukhona okunikezwayo lapha.
Okufanele ukuchitha izinsuku ezingaphezu kwezingu-10 uvakashela iGoa, ukujabulela, ukuba nesikhathi, hhayi ukugijima. Uqasha isithuthuthu futhi unokuzimela okuningi futhi, ngaphezu kokuba yindlela engcono kakhulu yokwazi konke ngempela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » IGoa, ipharadesi eNdiya
Yini ongayibona esifundeni saseMontmartre eParis
Plovdiv, ongakubona kuleli dolobha laseBulgaria